ဦးသန်းရွှေစိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရင် လာရောက်တရားစီရင်ခံပါ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇာနည်ကြီး၊ မတ် ၁၂၊ ၂၀၁၄
၁။ တရုပ်နှင့်အိန္နိယပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြား စစ်အစိုးရရပ်တည်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း
၂။ အမေရိကန်အကူညီ (ပိတ်ဆို့မှုလွတ်မြောက်ရေး) ဦးသန်းရွှေ မလုပ်နိုင်ခြင်း
၃။ စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းကြီး ဦးသန်းရွှေနှင့်ဂိုဏ်းတစ်ခုလုံး လုံခြုံမှု အာမခံရရှိခြင်း..
အထက်ပါ(၃)ချက်ကြောင့် အကြမ်းဖျင်းမှတ်ယူနိုင်သည်။ လူအများက နံပါတ်(၃)အချက်သည် အဓိကဖြစ်သည်ဟု အချေတင်ပြောနိုင်ပါသည်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေမန်းက ပွင့်လင်းစွာ ကြံခိုင်ရေးပါတီစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တစ်ခုတွင် ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အငြိမ်းစားယူသွားသူ စစ်အာဏာရှင်ဦးသန်းရွှေတို့ ဘဝလုံခြုံမှုရှိရန် လက်ရှိအစိုးရတွင် တာဝန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်တပ်တွင် လူသစ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို ၄နှစ်အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အသက် ၅၅နှစ်အထက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအားလုံးကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အငြိမ်းစားယူခိုင်းလိုက်သည်။ လာဘ်စားမှုအကင်းဆုံး၊ မှန်မှန်အလုပ်ဆုံး (ဆိုသူ) စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ကို အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ သမ္မတဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဦးသိန်းစိန် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် အရေးယူခြင်းမလုပ်နိုင်ရန် ဦးရွှေမန်းကို လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဖြစ်စေသည်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများကို စီးပွားရေးပညာသင်ပေးပြီး၊ မကြာမီ တရားဝင်စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ဖြစ်လာစေသည်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဆိုလျှင် အညံ့ခံလာပါက NLD ဦးတင်ဦးအပါဝင်၊ ဦးထွန်းကြည်၊ ဦးကျော်ဘ၊ ဦခင်ညွန့်… အားလုံးကို မကြောင့်မကျ၊ နေထိုင်နိုင်မည့် စီးပွားလုပ်ငန်း၊ လိုင်စင်များကို ချပေးဖို့ အစိုးရသစ်က အသင့်ရှိနေသည်။ ပေးလည်း ပေးနေပါသည်။
လူကောင်း၊လူတော် (သို့မဟုတ်) လူတော်လူကောင်း
ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရွေးချယ်ရာတွင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ (သို့မဟုတ်) လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်များမှ လာဘ်စားမှု နာမည်ပျက် နည်းပါးသူများကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ငွေပမာဏ အလွန်များပြားလှသော ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးသည် ခန့်ပြီး တစ်နှစ်အကြာ လာဘ်စားမှုအရေးများဖြင့် တာဝန်မှ အနားပေးခံရသည်။ အစိုးရဝန်ထမ်း အကြီးစားအရာရှိများစွာလည်း အရေးယူ၊ ရွှေ့ပြောင်းခံရပြီး ထောင်ဒဏ်အပြစ်မပေးပါ။
ထိုသို့အရေးယူပြခြင်းသည် ခေတ်စနစ်သစ်အတွက် လူကောင်း၊လူတော်များဖြင့် စတင်နေသည်ကြောင်း ကျေနပ်ဖွယ်ရဖြစ်သည်။ သို့သော် လူတော်၊လူကောင်းများ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့၊ လူတော်လူကောင်းများ တိုင်းပြည်၊ အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာဖို့ လိုနေပါသည်။
လက်ရှိ အစိုးရဝန်ကြီး ၃၆ဦးသည် ရိုးသားမှုအရှိဆုံး ဟု ပြောကြသည်။ အားလုံးနီးပါးသည် စစ်ဗိုလ်ဟောင်းများဖြစ်သည်။ အရပ်သာ လက်ချိုးရေတွက်ရပါသည်။ သို့သော် ဒုဝန်ကြီးများမှာ ပညာရပ်တတ်ကျွမ်းသူများ ဖြစ်ကြသည်။ စတင်လေ့ကျင့်နေသော ဒုဝန်ကြီးများက ဝန်ကြီးများကို ဖြောင်းဖျ ရှင်းပြ ပြောဆိုနိုင်ကြသည်။
သို့သော် အချို့ခေါင်းမာသော ဝန်ကြီးများက အခြားသူများ (အထူးသဖြင့် ဒုဝန်ကြီးများ) ၏ တင်ပြ၊ဆွေးနွေးမှုများကို နားမလည်လဲ၊ လက်မှတ်ထိုးပေးခြင်း လုပ်နေရသည်။ အချို့ဝန်ကြီးများ ခေါင်းမာနေဆဲဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နောက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးပါက ဝန်ကြီးများ လူတော်လူကောင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ မြန်မာနိုင်ငံမှ မြစ်သဲ၊ ပင်လယ်သဲများကို အခြားနိုင်ငံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးများက အလွန်နှစ်သက်သည်။ သို့သော် ထိုသယံဇာတ (သဲ , Sand) ကိုပင် မြန်မာပြည်ဦးပိုင်မှ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက နိုင်ငံလုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြပြီး လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသည်။ သူတို့ပဲ တင်ပို့မည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုကဲ့သို့ သဲမြေကိုပင် ထိန်းချုပ်ထားပါက အခြားသယံဇာတများအတွက် လက်ဝါးအုပ်အရင်းရှင် စစ်အာဏာရှင်များသာ ကြီးစိုးနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ငွေ၊ ကြေးနီ၊ နီကယ်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဘော်၊ အဖြိုက်နက် စသည့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပုလဲ၊ ကျောက်စိမ်း၊ ကျောက်မြတ် စသည့်အဖိုးတန် သယံဇာတများ ဘယ်လောက်နှင့်ရောင်းချသည်ကို မသိနိုင်ကြပါ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းအရ ဓါတ်ငွေရောင်းချရရှိငွေ အကောင့်ကို သူစတင်အုပ်ချုပ်ပြီး၊ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ပြည်သူလူထုမှာ လက်ပတောင်းတောင်၊ ကြေးနီနှစ်စဉ် ဘယ်ဈေးနှင့်ရောင်းချမှန်းလဲ မသိနိုင်၊ ဓါတ်ငွေ ဘယ်ဈေးနှင့်ရောင်းချလဲမသိနိုင်။ ပြည်သူလူထု မသိသင့်ဟု ပိတ်ဆို့ထားလျှင်လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပင် မသိနိုင်ဖြစ်နေပုံရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း နှာစေး၊ မသိချင်ယောင် ဆောင်ရသည်။
သူသာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လျှင် လျှို့ဝှက်ချက်များစွာ ဖေါ်ထုတ်ခံရမည်ကို ကြောက်နေသော စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများက ကျားကုတ်ကျားခဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတ မဖြစ်ရေးကို လုပ်ဆောင်နေသည်။
စီးပွားရေး လက်ဝါးအုပ်မှုများတွင် ဦးပိုင်နှင့်၊ တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများက လက်ဝါးအုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ နာမည်ဖြင့် ရေးသားရလျှင် အရပ်သား၊ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေ ကဲ့သို့သော လက်ဝါးအုပ်အရင်းရှင်တစ်ဦး လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ရုံသာမက၊ ခပ်တည်တည် မီဒီယာများကို ဖြေကြားနိုင်သည်။ ဇေကမ္ဘာကိုပင် ဘာမှမလုပ်နိုင်သော လူထုနှင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဖို့ ဇေကမ္ဘာထက် အဆ ၁၀၀ခန့် လက်ဝါးကြီးအုပ်နေသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း၊ ဦးအောင်သောင်းနှင့်သားသမီးများ အုပ်စုကို အဘယ်မှာ အရေးယူနိုင်မည်နည်း။ ဒီလိုပဲ လူနာမည်နှင့် ရေးသားပါက အစိုးရဝန်ကြီး ၇၅ရာနှုန်းကို ရေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့် လက်ဝါးအုပ်အရင်းရှင်စနစ်အကြောင်း ဤမျှသာရေးလိုပါသည်။
အဖြေရှာခြင်း (လူတော်လူကောင်းများ နေရာရစေခြင်း)
အချို့ကလည်း အရှက်တရားရအောင်၊ မီဒီယာအားဖြင့် သူတို့လုပ်သမျှကို အချက်လက်များဖြင့် ဖော်ထုတ်ရေးသားရန် တောင်းဆိုကြသည်။ ခက်သည်မှာ အထက်ဖေါ်ပြပါ လွန်ကဲလွန်းသည် လက်ဝါးအုပ်စီးပွားသမားများသည် (ဆရာမင်းသိင်္ခ စကားနှင့်ပြောရပါက) မျက်နှာကို သမံသလင်းနှင့်ပွတ်တိုက်ပြီး ပြောင်ပြောင်နေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ မီဒီယာများကို အင်တာဗျူးခံနိုင်ခြင်းကိုလည်း အင်မတန်လေးစားဘွယ်ဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့က ခက်ခဲစွာဘဝကို ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုတော့ သားသမီးများက စီးပွားလုပ်တတ်တော့ ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့…” ဟု ပြောပဲပြောတတ်ပါသည်။
သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်ကဲ့သို့ ကိုယ်တိုင်ကလဲဖေါ်ထုတ်ချင်၊ စီးပွားပြိုင်ဖက်များက တိုက်တွန်းအားပေးသောကြောင့် ဦးသန်းရွှေမြေးအကြောင်း၊ ဦးတေဇအကြောင်း အနည်းငယ်ဖေါ်ထုတ်ရေးသားသော ဂျာနယ်သတင်းစာ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရသည်။ ထုတ်ဝေခွင့်ပါမစ်ရုတ်သိမ်းခံရသည်။ သို့သော် ဂျာနယ်က အမည်သစ်တစ်မျိုးနှင့် ဆက်လက်ထုတ်ဝေနေသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မြန်မာတစ်ဦးက ဦးဆောင်ထုတ်ဝေသည့် ဂျာနယ်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ဝါးအုပ်အရင်းရှင် စစ်ဗိုလ်ဟောင်း၊ ခရိုနီများက လာဘ်ထိုး၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့အကြောင်း မရေးရန် တိုက်ပိတ်ခံရသည်။
တိုက်ပိတ် ဟုခေါ်သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို စစ်အစိုးရခေတ်က ဖတ်ဖူးသည်။ အစိုးရကို အတိုက်ခံလုပ်ပါက ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချ၊ တိုက်ပိတ်ခြင်းဟု နားလည်ရသည်။ တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က အစွမ်းထက်သော သတင်းစာဆရာများကို အစိုးရရာထူးတစ်ခု ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် စာရေးဖို့အချိန်မရှိဖြစ်သွားသည်။ အစိုးရအတွင်းဝန် ရာထူးတစ်ခု၊ နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်ရာထူး ပင်လျှင် ယခုခေတ်ငွေကြေးဖြင့် ဒေါ်လာ တစ်သောင်းကျော် လစာရရှိသွားသည်။ ထိုမျှလစာကောင်းသော ရာထူးရရှိသွားသူသည် အဘယ်မှာ အစိုးရမဟုတ်တာကို ပြောရဲတော့မည်နည်။ သူ့ပါးစပ်ပေါက်ကို အာဏာ၊ငွေဖြင့် ပိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းသည် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ တိုက်ပိတ်နည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဖတ်ဖူးပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယခုခေတ်တွင် မီဒီယာကို နေရာပေးထားခြင်းသည် အလွန်ကောင်းပေသည်။ အစိုးရနှင့်ပြည်သူကြား မည်သူ့ကိုမျှ ဖက်မလိုက်သော မီဒီယာ၊ သတင်းစာများများ ရှိနေဖို့အရေးကြီးလှသည်။
နောက်ထပ် လူတော်လူကောင်များစွာမှာ နိုင်ငံခြားတွင် ရှိနေသည်။ သူတို့မှာ အနိုမ့်ဆုံး အမေရိကန်ရောက် စားသောက်ဆိုင်စားပွဲထိုးမှာ တစ်လ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ခန့်ရသည်။ နေစရိတ်၊စားစရိတ်နှုတ်လျှင် တစ်လ ၇၅၀ ဒေါ်လာခန့် ကျန်သည်။ ကျပ် ၅သိန်းလောက် စုမည်ဆိုလျှင် စုနိုင်သည်။ အနိုမ့်ဆုံးအဆင့် မြန်မာပြည် စားပွဲထိုးမှာ တစ်လ ကျပ်၅သောင်း၊ နေစရိတ်၊စားစရိတ်ငြိမ်း ဖြစ်သည်။ ၁၀ဆမက စုဆောင်းငွေ ကွာခြားသည့်အပြင်၊ နေထိုင်စားသောက်ပုံလည်း ဆီနှင့်ရေ ကွာခြားမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သာမန်အလုပ်သမားများမှာ မပြန်လာနိုင်ပါ။ လစာ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၊ တစ်သောင်း ရနေသူအဖို့ ပြန်လာဖို့မဖြစ်နိုင်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် နိုင်ငံခြားမှ ပညာရှင်မြန်မာများ ပြန်လည်အသုံးချရေးမှာ ကပ်စေနည်းသော မြန်မာအစိုးရနှင့် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များအဖို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများကို အလုပ်မခန့်နိုင်ပါ။
အသက်ကြီးသော စေတနာရှင်မြန်မာများ ဥပမာ ဦးသန့်မြင့်ဦး ကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်များသာ ပြန်လာလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့မှာလည်း အစိုးရအကြံပေး၊ လုပ်ငန်းလုပ်ရင်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများဖြင့် စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်းရသည်။ အစိုးရအကြံပေးလုပ်ပြီး အစိုးရ လိုင်စင်ပါမစ်၊ ဟိုတယ်ပါမစ်လုပ်စားနေသူ များစွာရှိနေသည်။ ထိုသူများသည် လူတော်၊ “ လူမကောင်း”များဖြစ်သည်။
စပယ်ရှယ်ဇုံ SEZ Special Economic Zone
မြန်မာပြည်တွင်းတွင် အချုပ်အချာပိုင် အထူးစီးပွားဇုံများဖြင့် တိုင်းပြည်ဝင်ငွေရှာဖွေရေးဖြစ်သည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်ဖြူ၊ သီလဝါ၊ ထားဝယ် စက်မှုဇုံ(၃)ခု တည်ဆောက်နေကြသည်။ ထိုနေရာများတွင် တရားဥပဒေ၊ စီးပွားဥပဒေ၊ အခွန်ကောက်များကို ဥပမာ စင်ကာပူနိုင်ငံကဲ့သို့ ကျင့်သုံးရန်၊ အဝင်အထွက် ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တရုပ်ပြည်ကြီးသည် အထူးစီးပွားဇုံများဖြင့် စတင်အောင်မြင်သွားသည်ကို အနှစ်၂၀အတွင်း မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ရသည်။ တရုပ်ကဲ့သို့ အထူးစီးပွားဇုံများကို ဗီယက်နမ်တွင် သိပ်မအောင်မြင်ပါ။ အထူးစီးပွားဇုံသည် ခပ်ရှင်းရှင်းရေးရလျှင့် ပြည်ပမှ ကုန်ကြမ်း၊ နည်းပညာ၊ ငွေ၊ စက်ပစ္စည်းများသာမက ပြည်ပပညာရှင်များဖြင့် လုပ်ကိုင်သည့် နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုကို မြန်မာပြည်တွင်း တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ရသမျှ ကုန်ချော အားလုံးနီးပါးကို ပြည်ပသို့ (မြန်မာဆိပ်ကမ်းကိုမဖြတ်ပဲ) လွယ်ကူစွာ ပြန်ထုတ်သွားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေရာများကို အုပ်ချုပ်ရမည့် မြန်မာများ ဗဟုသုတမရှိမှု၊ စရိုက်ဟောင်း အာဏာပြိုင်နေမှု အခက်ခဲများကြောင့် မြန်မာစက်မှုဇုံများတွင် ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များ လာရောက်မရင်းနှီးနိုင် ဖြစ်နေသည်။ အထူးသဖြင့် အာဏာရှင်စနစ်၊ Corruption and Nepotism များဖြင့် လူတော်၊ လူကောင်းများ မအုပ်ချုပ်နိုင်သေးသရွှေ့ နှေးကွေးနေမည်သာ ဖြစ်သည်။
SEZ အထူးစက်မှုဇုံကဲ့သို့ မြန်မာပညာတတ်များကိုလည်း အထူးမြှင့်တင်ပေးဖို့ လိုနေပါသည်။ ၂၀၁၄တွင် အသေးစား၊ အလတ်စား ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ SME small & medium enterprises ကို အားပေးတော့မည်ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် အစိုးရပရိုဂျတ်များအား လပ်စားမှုလုပ်သူများကို ထိုင်ကြည့်နေရသည့် အခြေအနေကြောင့် သမ္မတပြောစကားကိုလည်း ပြည်သူလူထုနှင့်၊ လုပ်ငန်းရှင်များက စိတ်မဝင်စားတော့ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ SME ကို အားပေးပါက လူတော်၊လူကောင်း လူငယ်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များ ကြီးပွားတိုးတက်လာမည်။ နိုင်ငံခြားရောက် လူငယ်များစွာ ပြန်လာကြမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ နိုင်ငံခြားရောက်လူငယ်များ အလုပ်ပြုတ်သောကြောင့်သာ မြန်မာပြည်ပြန်လာရသည်။ မြန်မာပြည်မှ အလုပ်သမားပေါက်ဈေး တစ်လ ကျပ်တစ်သိန်း လစာဖြင့်လဲမလုပ်နိုင်၊ လုပ်ငန်းထောင်ဖို့ကလဲ သိန်းရာ၊ ထောင်ချီပြီး ရင်းနှီးမှုလိုအပ်ခြင်း၊ အရင်းအနှီးမပါပဲ အမြက်ရှယ်ယာလုပ်မှုကိုလည်း မြန်မာလူငယ်များအကြား ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ ဖြုတ်ထုတ်သတ် အကျင့်များ မြန်မာ့စီးပွားရေးစနစ်တွင် ကြီးစိုးနေဆဲဖြစ်သည်။
the Voice သတင်းစာ အယ်ဒီတာအာဘော်တွင် မြန်မာအစိုးရက အခွန်ရရှိရေးကို ဖိဖိစီးစီး လုပ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။ ကောင်းသောအလားအလာဖြစ်သောလည်း ခရိုနီများကို အခွန်ကောက်ရန် စနစ်မရှိသေးပါ။
“ ဟေ့ကောင်..ခရိုနီ၊ မှန်မှန်စာရင်းစစ်ပြီး အခွန်မှန်မှန်ပေးစမ်း …” ဟု အစိုးက အမိန့်ပေးလျှင် ခရိုနီသည် အစိုးရကို ဖင်ဗူးထောင်ကန်တော့လိုက်ပါ အစိုးရလည်း ပျော့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ခရိုနီမပြောနှင့်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်း အခွန်မပေးလိုပါ။ အခွန်ပေးအောင် စနစ်တစ်ခု ရှိရပါမယ်။
နောက်တစ်ခုမှာ အရေးကြီးသော အစိုးရဌာနများ အထူးသဖြင့် ငွေအသုံးများသော
ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လမ်းတံတားလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ ဆည်၊ ရေကာတာလုပ်ငန်း စတဲ့လုပ်ငန်းများတွင် Quotation System ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်။ ထိုသူများသည် လုပ်ငန်းရရှိရေးတွင် ပါဝါရှိရန်လိုသည်။ ဥပမာ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ ၂ခုရွေးချယ်ရေးတွင် အမှန်ကန်ဆုံးလုပ်ဆောင်သွားသော ဝန်ထမ်းများကို ချီးကျူးလေးစားရမည်။ ထို Quotation အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများကို အနည်းဆုံး ကားတစ်စင်းစီ တင်သွင်းခွင့်၊ မြေတစ်ကွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဆုချရမည်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးလှသော ငွေကြေးကိုင်တွယ်သူများကို လစာတိုးပေးစရာမလိုပါ။ ဘောနပ်စ် ပုံစံ ဆုချရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ အရေးကြီးသောနေရာများမှ ဝန်ထမ်းများကို Special Bonus System ပေးရမည်။ သို့မှသာ ထိုသူများသည် လပ်စားမှုနည်းပါးသွားမည်။ ပညာရှင်များသည် လာဘ်စားမှုကို ရှောင်ရှားလေ့ရှိသည်။ အချို့မတတ်သာ လာဘ်စားသည့်နေရာသို့ ရောက်သွားသော တရားသူကြီးတစ်ဦးသည်၊ ငွေနောက်လိုက်ရင်း မျက်နှာပြောင် တရားစီရင်မှုတစ်ခုလုံး ပြိုလဲ၊ ယိုင်လဲသွားရသည်။ သို့သော် မှန်မှန်ကန်ကန် မိဘမျိုးရိုး ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းပြီး၊ လာဘ်စားမှုများကို ရှောင်နေသူ အစိုးရအရာရှိကြီးများစွာ ရှိနေသည်။ ထိုအရာရှိကြီးများသည် နေရာမရကြ၊ နေရာမပေးခံရပဲ ချောင်ထိုးခံထားရသည်။
ဥပမာ ရန်ကုန်မြို့နယ်တရားသူကြီးရာထူးလိုချင်ပါက သိန်းပေါင်းထောင်နှင့်ချီပြီး လပ်ထိုးရသည်အပြင်၊ သားသမီးများကိုလည်း အမျိုးစပ်ထားရသည့် Corruption & Nepotism စနစ်မှာ အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သည်။
Eleven Media တွင် စံပြပုဂ္ဂိုလ်များကို ရွေးထုတ်ဆုပေးသည့် အစီအစဉ်တွင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်း (7Day News Hero) အဖြစ်
ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်(ပင်းတယဆေးရုံအုပ်) ကို ရွေးချယ်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ပင်းတယမြို့နယ်တွင် တာဝန်ကျစဉ် ၂ နှစ်တာကာလ အတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိ လူနာရှစ်ထောင်ကျော်အား အခမဲ့ ဆေးကုသပေးခဲ့သည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားသည့် တောင်ပေါ်ကျေးရွာ များသို့ ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်ကာ ဆေးကုသပေးရင်း ကျေးရွာ၏ လို အပ်ချက်များကို လည်း ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ သည်။ စသည့် လူတော်လူကောင်းများစွာကို မြှင့်တင်ပေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကောင်းပေစွ။
လူဆိုးများ ဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုလည်း ပြည်သူလူထုနှင့်မီဒီယာများက သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် အရေးမယူနိုင်ပါ။
ထို ဝိသမလောဘသားများသည် နိုင်ငံခြားမှ အရင်းရှင်ကြီးမျာ အထူးသဖြင့် တရုပ်ပြည်မှရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများ လွန်ခဲ့သော ၂၅နှစ်က တရုပ်ပြည်ပြုပြင်ပြောင်းကာစ နည်းလမ်းများကို သုံးနေကြသည်။ လက်ဝါးအုပ်လုပ်ငန်းမှာ အခွန်မရှိ၊ အမြတ်ငွေများကို ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုဥပဒေဖြင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ပြည်တွင်းသို့၊ ပြန်ဝင်လာကြသည်။ ထိုအခါ နှစ်၆၀၊ နှစ်၉၀ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားကြသည်။ ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် Property လူနေအိမ်ယာ၊ လယ်ယာမြေများကို ဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားသည်။ မည်သည့်နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီနာမည်ဖြင့် လူနေအိမ်၊ လယ်ယာမြေများကို ဝယ်ခွင့်မပေး။ စီးပွားရေးလုပ်ပါက စီးပွားလုပ်သော Industry Estate, Industrial Land, Shop House, Ware house များကိုသာ ဝယ်ယူခွင့်ရသည်။ မြန်မာပြည်တွင် အိမ်မြေများကို ကုမ္ပဏီများက ဝယ်ယူခြင်းကို ထိန်းချုပ်ရပေမည်။
ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်သူ လက်ဝါးအုပ်စီးပွားရေးသမားများအား ကာကွယ်ရန် NLD, ရှစ်လေးလုံး နှင့် ကြံခိုင်ရေးအမတ်သစ်များ ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်ရန်၊ လူငယ်ထုအင်အားသည် အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။ အချို့ လူငယ်စီးပွားသမားများပင် ဝိသမစီးပွားစိတ်ရှိလာပြီး အစိုးရနဲ့လုပ်ရတာမလွယ်ဘူး၊ ကေအင်ယူအဖွဲ့နဲ့လုပ်ရတာမှ အမြတ်ပိုရတယ်…ဟု ပြောနေကြသည်ကို စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိရသည်။
လူဆိုးများ အပြစ်တွေကို ဝန်ခံဖို့ဆိုသည်မှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်က အပြစ်ရှိကြောင်း လက်ခံမှဖြစ်မည်။ ယခု အစိုးရဝန်ကြီးများသည် သူတို့ အနှစ်၅၀လုပ်ခဲ့သည်ကို ကျဆုံးသွားသော ဦးနေဝင်း အုပ်စု၊ ဦးခင်ညွန့်အုပ်စုကိုပဲ အပြစ်တင်နေကြသည်။ သူတို့က ကောင်းသည်။ ယခုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ပေးနေသည်…စသဖြင့် သူတို့ကောင်းသည်ဟု အရှက်မရှိပြောနေကြသည်။ ဝန်ကြီးအချို့က သူတို့မှားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဘာမှမသိနားမလည်သည်ကို နိုင်ငံကြီးဖွင့်လိုက်မှ သိရသည်။ အလွန်မြန်စွာ လိုက်နေရသည်..ဟု ပြောကြသည်။ ခက်သည်မှာ အခြားသူများကိုလည်း နေရာမပေး။ လူတော်လူကောင်းများကိုနေရာ မပေးသေးပါ။ လူနာမည်ဖေါ်ထုတ်ရေးသားသောမဂ္ဂဇင်းတစ်ခု ..ဥပမာ..”အရှက်မရှိသောမျက်နှာများ” မဂ္ဂဇင်း ထွက်လာလျှင်ကောင်းပေမည်။
ဦးသန်းရွှေ တကယ် နောင်တရဖို့လိုပါမည်။ သူတကယ်နောင်တရလျှင် တိုင်းပြည်ကိုထွက်ပြီး စကားတစ်ခွန်းပြောသင့်သည်။ မြန်မာပြည်သူလူထု အရှေ့တောင်အားရှတွင်သာမက၊ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး ဖြစ်သွားရသည်မှာ လက်ရှိအသက်ရှင်နေသောလူများတွင် ကျွန်ုပ်အဓိက တာဝန်ရှိပါသည်…ဟု ထွက်ပြောလိုက်လျှင် လူထုအားလုံးက ခွင့်လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ အရှက်တရားမဲ့စွာ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားလုပ်နေသူများ အရှက်ရသွားနိုင်ပါသည်။ ဦးသန်းရွှေကို တရားခုံရုံးတင်မည့် အဖွဲ့များလည်း ပေါ်လာနိုင်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သော တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ကလည်း ခွင့်လွှတ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဇာနည်ကြီး – ရွှေဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းကိုကြည့်ပါ၊ မြန်မာခေါင်းဆောင်များ ညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးနေပါတယ် (2)
5 Responses to ဦးသန်းရွှေစိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရင် လာရောက်တရားစီရင်ခံပါ
naing win on March 12, 2014 at 12:13 pm
VERY GOOD I LIKE THAT WE WANT
Kill_the_Devil on March 12, 2014 at 6:25 pm
I don’t think ,than shwe will admit his SINS,because he is thug,thief & Crook.
Zarni Gyi on March 13, 2014 at 5:24 am
၂၀၁၄ မတ်လတွင် ယူကရိန်းနိုင်ငံပိုင်သော ကျွန်းကြီးတစ်ခုကို ရုရှားနိုင်ငံက အင်အားသုံးပြီး၊ ခွဲထွက်စေလိုက်သည်။ ထိုအခါကျမှ ပြည်သူလူထုကို အနိုင်ကျင့်သော ယူကရိန်းအစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အစိုးရဆန့်ကျင်သူများကို ရိုက်နှက်သူ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဒူးထောက်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း လုပ်ခဲ့သော်လည်း နောက်ကျသွားချေပြီ။ မြန်မာပြည်တွင် အလားတူပြသနာမဖြစ်ဘူး မပြောနိုင်၊ မြန်မာစစ်တပ်သည် ဝ၊ ကိုးကန့်၊ ကချင် နယ်မြေများတွင် အတင်းထိုးဖေါက်နေရာယူထားပြီးသော်လည်း အင်အားကြီးများလှသော တရုပ်ပြည်၏ နိုင်ငံရေးဖိအားပေးလာလျှင် ထိုဒေသခံ ခေါင်းဆောင်များက တရုပ်ပြည်ဘက် ပါသွားနိုင်ပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို တရုပ်မှ တာတာ၊မွန်ဂိုအင်ပါယာခေတ် ရာဇဝင်ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ တရုပ်မြန်မာ၊ ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းပုံကို ကြည့်လျှင် တရုပ်ပြည်ကြီး၏ သြဇာ၊ အမြှော်အမြင်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ ပေါ့ပေါ့မတွက်ပဲ ဗန္ဓုလခေတ်ကဲ့သို့ ကိုယ့်အင်အားကို အဟုတ်မှတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ကို စစ်အင်အားဖြင့် အံတုခဲ့၍ ရှုံးနိုမ့်ခဲ့ရဖူးပါသည်။ ယခု တရုပ်၊အိန္နိယ အင်အားကြီးလာမှုသည် မြန်မာခေါင်းဆောင်များအတွက် အတူးအရေးကြီးသည်။ ပြီးမှ ဒူးထောက်တောင်းပန်သော သီပေါမင်းကဲ့သို့ မဖြစ်စေလိုပါ။ ဘုရားသခင်က အချိန်များပေးထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများသည် တိုင်းပြည်ကို မတောင်းပန်တောင်၊ ခေါင်းဆောင်သစ်များကို တောင်းပန်ရမည်။ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများသည် တိုင်းပြည်ကို မတောင်းပန်တောင်၊ ခေါင်းဆောင်သစ်များကို တောင်းပန်ရမည်။ တရုပ်နှင့် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး ပြိုင်ဆိုင်ရန်အတွက်၊ ပရိယ်မကြွယ်ဝသော တရုပ်ကြောက်၊ တရုပ်ကျေးဇူးရှိ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နေရာ ဆက်လက်ရှိနေပါက၊ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်စိုးရိမ်ရသည်။ ဦးသန်းရွှေကတော့ ထွက်ပေးလိုက်လေပြီ။ သို့သော် ကျန်နေသေးသည်၊ ဦးသန်းရွှေကအစ မိမိအပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံသင့်ပေသည်။ မိမိအပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံသင့်ပေသည်။ Zarni
mg la on March 14, 2014 at 11:49 pm
The most notorious dictator (responsible person) in myanmar are NE WIN and THAN SWE..Everyone in myanmar knows about it., BUT they are still at large (ne win in hell and than swe is in waiting list to hell). Government is still protecting him..because they are same flock.
Arkar on March 15, 2014 at 10:39 am
Witnesses are needed to put Than Shwe, the Pig, to justice. Ask witnesses to come forward before too late. Do not forget current Constitution does not allow retroactive punishment. Every crime, bad deed and mistake should not be pardoned. The most important thing now is look forward. We should do something, for example, how to support Burma; how to prevent something like that in Burma in the future. Think ahead for Burma, every person must be levied and every young male must be enlisted to defense Burma including your son and mine.
Another thing is that if Aung San Suu Kyi becomes the head of Burma, my neighbor Daw Gyi who married to an Indian and have3daughters and5sons will run for President in Burma. She is so confident that she will be the next President of Burma. She also said that all her friends and family members married or related to Indian, Thai or Chinese in Burma. They also can be the next President of Burma even the married to foreigners. Good luck and God Bless Burma.